Ungalisebenzisa Kanjani ikhasi Lokucinga Kwasekhaya | Martech Zone
Ungalisebenzisa Kanjani ikhasi Lokucinga Kwasekhaya
NgoLwesithathu, Okthoba 17, 2012 NgeSonto, Okthoba 21, 2012 Douglas Karr
Ochungechungeni oluqhubekayo lokwandisa isiza sakho sokumaketha okungenayo, besifuna ukunikeza ukwehlukaniswa kokuthi ikhasi ungalisebenzisa kanjani okuqukethwe kwasendaweni noma kwendawo. Izinjini zokusesha ezifana ne-Google ne-Bing zenza umsebenzi omuhle wokuqoqa amakhasi aqondiswe ngokwendawo, kepha kunezinto ongazenza ukuqinisekisa ukuthi ikhasi lakho lasendaweni likhonjwe kahle esifundeni esifanele namagama angukhiye ahlobene noma amabinzana.
Ukusesha kwasendaweni KUKHULU… ngamaphesenti amakhulu alo lonke usesho olufakiwe ngegama elingukhiye elihambisanayo lendawo yomuntu oseshayo. Izinkampani eziningi ziphuthelwa ithuba lelo nokwenza kahle kwasendaweni inikeza ngoba bezwa ukuthi inkampani yabo ayisiyo wendawo… Kuzwelonke noma emhlabeni jikelele. Inkinga, yiqiniso, ukuthi ngenkathi bengaziboni bengabendawo, amakhasimende abo abazoqhubeka asesha endaweni.
Isihloko sekhasi - Ngokude, into ebaluleke kakhulu yekhasi lakho yithegi yesihloko. Funda ukuthi ungakwenza kanjani nokwandisa omaki bakho besihloko futhi uzokwandisa isilinganiso sokukala nokuchofoza kokuthunyelwe kubhulogi lakho kumakhasi wemiphumela yenjini yokusesha (ama-SERP) kakhulu. Faka kokubili isihloko nendawo kodwa uyigcine ngaphansi kwezinhlamvu ezingama-70. Qiniseka ukuthi ufaka nencazelo ye-meta eqinile yekhasi - ngaphansi kwezinhlamvu eziyi-156.
I-URL - Ukuba nedolobha, isifundazwe noma isizinda ku-URL yakho kunikeza injini yokusesha indawo eqondile leli khasi elikhuluma ngayo. Kubuye kube ukuhlonza okuhle komsebenzisi wenjini yokusesha futhi njengoba babuyekeza okunye okufakiwe kwekhasi lomphumela wokusesha.
Kuphikelelephi - Owakho isihloko esenziwe kahle kufanele inikeze igama eliyisihluthulelo isihloko esicebile kanye nendawo emaphakathi yezwe ozama ukuyilungiselela okokuqala, bese ulandela ngolwazi lwakho lokuma komhlaba. Qiniseka ukuthi ufaka incazelo enamandla yemeta yekhasi - ngaphansi kwezinhlamvu eziyi-156.
Izinsiza ze-SEO Zendawo | I-Indianapolis, Indiana
Ukukwabelana Komphakathi - Ukuvumela isivakashi sakho ukuthi size futhi sabelane ngekhasi lakho kuyindlela enhle yokuthola ukuthi sikhuthazwe emiphakathini edingekayo.
Map - Ngenkathi imephu ingakhashuli (ingaba ne- KML), ukuba nemephu ekhasini lakho kuyindlela enhle yokunikeza ulwazi lokuxhumana lwabasebenzisi bakho ukuze bakuthole.
Iziqondiso iyi-plus engeziwe futhi ingasetshenziswa kalula nge-Google Maps API. Qinisekisa ukuthi ibhizinisi lakho lifakwe ohlwini lwezinkomba zebhizinisi le- Google futhi Bing ngendawo enembile ebhalwe kwiphrofayili yebhizinisi lakho.
Ikheli - Qiniseka ukuthi ufaka ikheli lakho eliphelele lokuqukethwe ekhasini.
Izithombe - Ukungeza isithombe ngomaki wendawo ukuze abantu babone indawo kumnandi, futhi ukwengeza ithegi ye-alt enendawo ebonakalayo kuyisihluthulelo. Izithombe ziheha abantu futhi zikhanga nokuseshwa kwezithombe… ithegi ye-alt inezela ekusetshenzisweni kwegama lendawo.
Imininingwane yezwe - Izimpawu zomhlaba, amagama ezakhiwo, imigwaqo enqamulelayo, amasonto, izikole, omakhelwane, izindawo zokudlela eziseduze - wonke lawa magama ngamagama acebile ongawabeka emzimbeni wekhasi ukuze ukhonjwe futhi utholiselwe indawo ekhasini lakho elungiselelwe i-. Ungamane ushiye igama elilodwa elingukhiye lesifunda. Abantu abaningi basesha besebenzisa izindlela ezahlukahlukene zasendaweni.
Hambayo - Izikhathi eziningi lapho izivakashi zizama ukukuthola, zizama ukukwenza kudivayisi yasendaweni. Qiniseka ukuthi unokubukwa kweselula okusebenzayo kwekhasi lakho losesho lwasendaweni ukuze izivakashi zikuthole noma zithole izinkomba eziya kuwe.
Nazi izindatshana ezihlobene ezingaba nentshisekelo:
Ungayisebenzisa kanjani i- Amakhasi okufika
Ungayisebenzisa kanjani Keywords ngempumelelo
Ungayisebenzisa kanjani i-a Okuthunyelwe kwebhulogi
Ungayisebenzisa kanjani i-a Ividiyo ye-Youtube
Ungayisebenzisa kanjani i- Ithegi yombhalo
Tags: indawo yebhizinisi ye-binggeonokwenza kahle kwezwengokwezwe lokhoizindawo ze-googleukwenziwa kwendawoukusesha kwendawoseo sendawoindawomappingamabalazwe
Inqubo Yokumaketha Okungenayo
Imithombo Yezokuxhumana kanye Nemikhiqizo Yokuhlanzeka Kwabesifazane
Okthoba 18, 2012 ngo-1: 26 AM
Okuthunyelwe kwakho kungasisiza kakhulu njengoba sikhombe amakhasimende endawo avela endaweni yaseMelbourne e-Australia. Manje sengingathola umbono wokwandisa iwebhusayithi yami izethameli zendawo.
I-Oct 18, i-2012 ku-6: i-10 PM
Ngakho-ke uchaza ukudala ikhasi lokufika lewebhusayithi yakho, elihlukile ekhasini eliyisiqalo, elenzelwe ukusesha kwasendaweni? Ngicabanga ukuthi bekungeke kube ukuhlakanipha ukudala amaningi ala makhasi okufika emadolobheni azungezile (ngenza ukumaketha kwe-inthanethi kwenkampani yophahla ehlinzeka ngamadolobha ayisihlanu azungezile)?
Ngiyabonga! Okuqukethwe okuhle.
I-Oct 20, i-2012 ku-2: i-09 PM
Ngiyabonga @disqus_hIZRrUgZgM: disqus. Ungahamba ngokweqile ngamakhasi wokufika owenziwe kahle wangakini. Angiqiniseki ukuthi ngizoba neyodwa yawo wonke amabhulokhi endawo engizama ukuwaheha, kepha ngizoba nezifunda ezibalulekile. Ngakho-ke, njengenkampani yomshuwalense kazwelonke, ngingahle ngibe namakhasi endawo ngayinye enkulu yedolobha… kepha hhayi wonke amadolobha. Udinga okuqukethwe okwanele ngakunye ukuze ukuhlukanise kokulandelayo. Esibonelweni sakho, ngingahle ngibe namakhasi ahlukene ama-5 - elilodwa lenzelwe idolobha ngalinye.